SHACABKA KENYA:Waxaa si weyn u soo kordhaya codadka dadka dalbanaya in ciidanka Kenya deg deg looga soo saaro Soomaaliya. | Voice Of Somalia
SHACABKA KENYA:Waxaa si weyn u soo kordhaya codadka dadka dalbanaya in ciidanka Kenya deg deg looga soo saaro Soomaaliya.
Posted on November 18, 2016 by Voice Of Somalia Image
Aragti Uruurin ay sameeyeen dhinacyo dhanka Warbaahinta ah oo baraha bulshada lagu soo bandhigay ayaa muujisay ku dhawaad labuu bar dadka reer Kenya iney doonayaan Ciidamada in laga soo saaro Soomaaliya.
Dadka ka soo horjeeda joogitaanka Ciidamada Kenya ee Soomaaliya oo gaaraya 53% ayaa dalbanaya in wiilashooda dib loogu soo celiyo dalka oo ay ka difaacaan Xarakada Al-Shabaab halkii ay Soomaaliya kula dagaallami lahaayeen.
Aragti Uruurintan ayaa sidoo kale muujisay 26% dadka reer Kenya iney doonayaan Ciidamadooda iney sii joogaan Soomaaliya halka 8% ay qabaan in haddii la helo ciidamo kale oo badalaya kuwa Kenya in iyaga laga soo saaro Soomaaliya.
Dalka Kenya ayaa waajahaya muddooyinkii u danbeeyay jahwareer dhanka Amniga ah kaas oo ka danbeeyay duulaankii ay xukuumadda dalkaas ku qaadday Soomaaliya sanaddii 2011-kii, waqtigaas oo wixii ka danbeeyay ay Kenya martigelisay weerarro dhiig badan uu ku daatay oo ugu weynaa weerarkii Westgate ee dhacay September 2013.
DHAGEYSO:Musuqmaasuqa Doorashada ee Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada oo Meel Xun Maray
DHAGEYSO:-Maxaa Lagu Xasuusan Doonaa Xasan Sheekh